विशेष सम्पादकीयः जनमत दुर्गतिका लागि हाे ? – Mukhundo.com
यो बेला देश विषम परिस्थितिमा छ । नोबेल कोरना भाइरसको संक्रमण फैलिदो अवस्थामा जटिल र निकै डरलाग्दो परिस्थितिमा देश पुगिरहेको बेला देशका सत्ता संचालन गर्ने एउटा पार्टी भने आन्तरिक कलह र द्वन्द्वका कारण देशको अवस्थालाई नै नाजुक बनाउने खेलमा लागिपरेका छन् ।
दुई पार्टीको एकतापछि जनताले अपेक्षा गरिरहेको जस्तै काम गरेको भए देशले मुहार फेरिन्थ्यो । देश झमल्ल हुने थियो । देशले विकासको गति समाउथ्यो र सम्बृद्ध नेपालको सपना साकार हुनेथियो । तर अहिले त्यो भइरहेको छैन ।
अहिले बाहलवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको शक्ति बाडफाडकै कारण अहिले जनताले दिएको मतको अबमूल्यन भइरहेको अनुभूती गराइरहेको छ ।
जनताले चुनावमा शक्ति बाडफाड र आन्तरिक कलहमै रोमलिनका लागि मत ब्यक्त गरेका हुन् ? भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ । सत्ता, कुर्सी र शक्तिका अहिले भइरहेको खेलले नेपालको राजनितिक फोहोर, गन्हाउने डम्पिङ साइड जस्तै बनेको छ ।
राजनिति मात्र होइन हरेक क्षेत्रमा खुट्टा तान्ने पुरानो चलनले नेपालको विकास र सम्बृद्धिमा ठेस पुगिरहेको छ । यो प्रबृत्तिबाट हाम्रा नेता र नेतृत्व पन्छिनु पर्ने होइन र ?